Naqshadeynta Naxwaha Maxay tahay sababta aad ugu habboon tahay in laguugu soo koobo Sawirrada SEO
Raadinta sawirrada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah guud ahaan goobtaistaraatiijiga, sidaa daraadeed waa inaad qaadataa sawirada muuqaalka SEO-ga si dhab ah, gaar ahaan haddii muuqaalka muuqaalku yahay aasaaska ololaha suuq-geynta.Tani waa sababaha website-yada sida WordPress oo ku siinaya qaab sawir ah oo toos ah oo ah qaabka ugu muhiimsan ee ku-oolinta goobta
Soo-helitaanka muuqaalka waa inay ku daboolaan sawirada boggaagaoo ay ka mid yihiin madaxa, sawirrada muuqaalka iyo sawirrada muuqaalka leh. Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare , Igor Gamanenko wuxuu sharxayaa sababta sawirHagaajinta waxay muhiim u tahay waxqabadkaaga
Marka aad ku dhejisid muuqaalkaaga qaabka saxda ahiyo weedha, waxay soo bandhigi doonaan raadinta sawir la xidhiidha mashiinka raadinta. Haddii sawiradaada lagu qoro sawirrada GoogleRaadinta, waxaad heli doontaa gaadiid dheeraad ah oo aad hagaajin karto muuqaalka astaantaada. Marka aad ka shaqeyneyso dhammaan sawiradaada oo aad sameysid tayo sareMuuqaal, waxaad arki doontaa koritaanka weyn ee gaadiidka.
Haddii aad ku dhejiso sawirro sir ah oo qarsoodi ah boggaaga,waxay heli doontaa gaabis oo dadka isticmaala waa inay sugaan si ay u helaan mawduuca ugu muhiimsan ee goobtaada. Xawaaraha hoose ee bogga waxaa loola jeedaa waayo-aragnimo user xundadka soo booqda gaar ahaan haddii browserka isticmaalaha uu soo rogo faylasha sawirada
Arrimaha sawir gacmeedku waa wax caadi ah xataa marka dhibaatadama laha wax la xiriira serverkaaga. Xaaladahan oo kale, booqdaha goobta ayaa akhrinaya maqaalka, laakiin ma arki doonaan wax sawir ah, oo kaliya qaar ka mid ahdhibcood halkaas oo sawirada la filayo inay noqdaan. Marka aad kuxirineyso sawirada adiga oo ku daraya qoraalka hoose, booqdayaasha goobtaada ma arki karaansawirro laakiin waxa uu akhrin karaa waxa sawirku u taagan yahay ka dib marka sawir qaadista sawirku dhaco.
Sida Loo Hagaajiyo Sawirradaada Boggaaga
Isku dhufashada sawiradu waxay hagaajinaysaa xawaaraha sicirkaee boggaaga. Iyadoo la tixgelinayo in inta badan martidaada aad gasho boggaaga qalabka mobile, muhiim ma aha in la buuxiyo xallinta qaddarintasawirada miisaanka megabytes. Waa inaad gooyaa xajmiga sawiradaada adigoo ilaalinaya tayo wanaagsan. Sidoo kale, qaabee sawirradaadaee shabakadda iwm. PNG, GIF iyo JPG. Waxaad sidoo kale xoqin kartaa metadata sawiradaada si aad u yareyso xajmiga.
Marka aad isticmaashid sawirro bilaash ah oo ka socda websaydh ama sawir sawir,waa inaad bedeshaa koobab farsameed oo ku xiran sida lambarada iyo xarfaha dheeriga ah, iyaga siinaya sharaxaad gaaban oo gaabanwaxa ay u taagan yihiin. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa ereyo muhiim ah oo la xidhiidha ganacsigaaga haddii ay la socoto waxa sawirku leeyahay
Had iyo jeer ku dar qeybaha hoose ee tilmaamaya waxaee sawirka. Tusaale ahaan, ku dar erayada sida "haween", "wax cunid" haddii ay tahay sawir qof dumar ah oo midhihii cunaya.
Sidoo kale loo yaqaan sharraxa hoose, qoraalka waawaxa muuqda marka sawirku uusan ku dhicin. Waxa kale oo lagu sharxayaa sawirka google-ka raadinta raadinta. Doorashadani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sharaxdosawir ahaan hal weedh
Istaraatiijiga oo la jaan qaadaya sawirradaada intiisa kalemaadada waxay ka fiican tahay inay u dhexeeyaan qaybaha
Awooda muuqaalku maaha inay ahaato midka ugu sarreeyamudnaanta laakiin waa inaad u samaysaa macaashka la soo sheegay iyo waxay qaadanaysaa dhowr daqiiqadood si loo dhammeeyo Source .